ဖြူဝင်းတဲ့ ဂျိုင်းသားလေးတွေ ရရှိစေဖို့ - Health - Myanmar Business Directory: Golden Place
Addabusiness or Add an event » or Addajob »
e.g. hotel, restaurant or place name
e.g. township or city name
Hotel Enquiry Form
May 31 2014 No Comments
ဂျိူင်းမည်းနေရင် အကျီင်္လက်ပြတ် လှလှလေးတွေ ၀တ်လို့ အဆင်မပြေဘူးနော်။ ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ဂျိူင်းသားတွေ မဖြူလို့ အခက်တွေ့နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဂျိူင်းဖြူအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ရင်နှင်း ပြောပြမယ်နော်။
ChoosingaDeodorant
ချိူင်းမွှေးနံ့ ပျောက်အောင် Roll on တွေ သုံးတာကိုလည်း သတိထားသင့်ပါတယ်။ တချိူ့ Roll on တွေမှာ ပါတဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေက အရေပြားနဲ့ ဓာတ်မတည့်တော့ ချိူင်းမည်းတာမျိူးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ Roll on သုံးပြီးမှ ဖြစ်လာတာဆိုရင်တော့ အဲ့ Roll on ကိုဆက်မသုံးပါနဲ့တော့။ ချွေးနံ့တွေပျောက်အောင် ရေချိူးပြီးချိန်မှာ ကျောက်ချဉ်ရေ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ချွေးနံ့ခံတွင်းနံဆိုးတွေအတွက် ဖြေဆေးဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ချွေးနံနံရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြထားတယ်နော်။
- သံပရာသီးကို တခြမ်းခြမ်းလိုက်ပြီး မည်းနေတဲ့ ဂျိူင်းသားတွေကို ပွတ်ပေးပါ။ မိနစ်၂၀ လောက်နေရင် ရေနွေးမှာစိမ်ထားတဲ့ အ၀တ်လေးနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။
- သံပရာရည်နဲ့ ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းဆီကို သမအောင်ရောမွှေပြီး ဂျိူင်းအောက်မှာ လိမ်းပေးပါ။ နာရီဝက်ကြာတဲ့အခါ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးလိုက်ပါ။ ရင်နှင်းပြောပြတဲ့ နည်းလေးတွေ အတိုင်း သေချာလုပ်ပေးသွားရင် ဂျိူင်းသားဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိနိုင်ပြီပေါ့။
sent to friend
print this business
အလှအပရေးရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးနေရာများ
ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်း ...
ထမင်းချက်တဲ့အခါ ထမင် ...
ခြေထောက်ဆေးပါ ရေနွေး ...
ယခုတလော အင်တာနက်ပေါ်မ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက် ...
sign up or login to add Comments
About Currency Exchange Rates and ATMs in Myanmar May 31 2014
Software မသုံးဘဲ Folder ကို Lock ချထားရအောင် May 31 2014
လာမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် May 31 2014
Telenor Myanmar မှ Sim-Card Distribution အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ် May 31 2014
Huawei Authorised Service Center မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ် May 31 2014
CFPB Takes Action Against Wells Fargo for Prohibited Education Loan Servicing Techniques May 31 2014
Payday advances have actually mostly marketed to low and moderate earnings customers May 31 2014
Let me make it clear about Ezcorp payday loan obligation that is financial on May 31 2014
Why Is Polyamory Therefore Typical in the LGBTQ+ Community? May 31 2014
The sex that is best Positions For ValentineвЂ™s Day May 31 2014
Prime Hub Design & Decoration
Apirl 10th Show
Time: 10 Apr 2015 5:00pm - 11 Apr 2015 4:00am
Venue: Nat Mauk Street, Bahan, Yangon
The Most Amazing Exhibition & Car Show
Time: 29 Jan 2015 9:00am - 1 Feb 2015 6:00pm
Venue: Tatmadaw Hall, Dagon, Yangon
Building 14 ,Room , Hnin Si Street
P: +9598989 460 45, +9598989 460 15